Ukukhethwa Okumnandi Kweefilosofi IiJokes
Imbali emfutshane yeHuman Philosophical
Kukho ininzi yefilosofi yamahlaya apho, ezinye zazo zingabandakanywa kalula kwizinto zokufundisa kubantwana nakubantu abadala. Ukususela kwiincwadi ezintathu ngesihloko nguTom Cathcart noDan Klein kumaphepha abuyele kwi-intanethi, ifilosofi iye yathwala ubuninzi beehlaya kwixesha elide, linikeza inyaniso kunye nokuhleka kwimeko ekhangelekayo yimeko yomntu. Imbali yefilosofi, eqinisweni, igcwele ihlazo.
Ukususela ngo-2007, i-duo ye-filosofi eguquguqukayo ye-Tom Cathcart kunye noDan Klein baye basebenzisa amahlaya ukuze bagcine ezinye iinyaniso ezisisiseko malunga neengqondo zabantu kunye nefilosofi zasendulo nezanamhlanje. Baye bafundisa umsebenzi onokuqalisa ukuqonda ifilosofi, ukubhala iincwadi ezintathu ngesihloko. Ngokukodwa izakhiwo zabo zithintela ekutsheleni ihlaya kwaye zichaze ukufaneleka kwayo kwisayensi enkulu.
Incwadi yokuqala yokuqala, "uPlato kunye nePlatypus Hamba kwi-Bar: Ukuqonda i-Philosophy ngokusebenzisa amaJokes" kwaqala ngo-2007 kwaye yayiyinto ebalulekileyo yokurhweba, ukuphula amahlaya ngokutsho kwamagatsha efilosofi okanye izihloko ezibanzi ezifana nokuxhatshazwa. Ngaloo nto, ikhethela amahlaya njengokuba "yintoni isandi sokubetha ngesandla," njengoko ziqhathaniswa nokucatshulwa kwePlato ngezihloko ezifana nenkolo, ingcinga kunye nokuqiqa.
"I-Aristotle kunye ne-Aardvark Yiya eWashington" yayiyincwadi yabo yesibini, eyapapashwa ngo-2008 kwaye isetyenziselwa iindaba zezopolitiko ezinzima kakhulu ukuthatha imiba yefilosofi.
Incwadi yabo yesithathu "I-Heidegger kunye neHippo Walk ngokusebenzisa loo maGates Pearly: Ukusebenzisa i-Philosophy (kunye namaJokes!) Ukuhlola Ubomi, Ukufa, Emva kokufa, kunye nayo yonke into ephakathi" (2009) inikezelwe kwisihloko esisodwa sefilosofi: ukungafi.
Ezinye zeeJokes eziMnandi kakhulu zeMbali
Amanye amahlaya angabonakaliyo kwaye angafumaneki kakuhle abuyele kwiphondo likaPlato, eqinisweni, "Umthetho Wokuqala Wefilosofi" yiyo yonke ifilosofi, kukho ifilosofi echasene neyantlukwano kunye "noMthetho wesiBini wefilosofi" uthi zombini ziphosakeleyo.
Ihlaya eliqhelekileyo elilizwile ngeNgama-18 e-England lalixelelwa ngokuthi "Ngaba uvile ukuba uGeorge Berkeley wafa? Intombi yakhe yayeka ukumbona!" Kwaye ngoku kutshanje, usenokuba ubonile le nto igalelwe izibilini zokuhlamba: "UThixo ufile - uNietzsche; uNietzsche ufile: UThixo."
Akukho nto ikhuselekile kwindawo yefilosofi yamahlaya, ingakumbi inkolo. Ngaba uyivile le nto? "Yintoni iBuddhist yatsho kumthengisi wenja elishisayo? Yenzele enye nayo yonke into; Wathini umthengisi kwiBuddhist xa ecela utshintsho? 'Utshintsho luvela ngaphakathi!' "
I-Ethics ayizange igweme ukuhleka, njengokuba kunjalo nale ntlonelo edumile. Kuyo, ummeli onobungcali kunye nefilosofi wayehlala engxoxweni enobungozi yenkolo. "Izulu kunye nesihogo, uya kuvuma, mhlawumbi uzahlukana nodonga," walwa nommeli. "Ukuba kwenzeka ukuba lo udonga luwa phantsi, ngubani na ongathi uyayakhela kwakhona?" Ubeka ukuba iilungisa ziza kubambelela ukuba ababi bayakwenza kwaye aba bantu bayakulahla. Uqhubeka esithi, "Ukuba le nkundla ifike phambi kwejaji, uyakholelwa ukuba uza kuphumelela?" Ifilosofi yaphendula yathi, "Kubonakala kum ukuba nayiphi na ijaji elungileyo liza kugqiba isigwebo kubantu abangendawo kubakho amathuba okuba udonga luqhubekele emlilweni wesihogo kunokuba luvela kwiParadesi, kodwa ngakolunye uhlangothi, Ndiyazi ngokuqinisekileyo ukuba isihogo ngokuqinisekileyo siqulethe ixabiso elipheleleyo labameli be-glib-tongued, kwaye ke akumele ndikumangalise ukuba bawuncede. "
Yintoni iNzululwazi Yezobupolitika?
Iingoma zeBeetles kunye neenjongo zeFilifi
Imbali Yenkwenkwezi Yenkwenkwezi 'iDarth Maul
Biography kaSara Boone
Indlela yokuhlahlela kwi-Wakeboard
Ukufundisa Umntwana Wakho UKayak
IiScholarships zeeKholeji ze-Engineering Majors
Iingoma ezi-8 eziphezulu zeVangeli zee-80s
UNdunankulu uStephen Harper
I-Wax Melana nePaint Technique
Abasigxina permanent: cómo tramitar la green card para los esposos
6 iindlela zokuphucula imidwebo yokucamngca
Ngaba iVodka ikhululeka kwiFreezer?